China matatu mutsara roller turntable slewing inotakura zvekunze giya 131.32.800 fekitori uye vagadziri | Wanda
Nhatu mutsara roller turntable slewing inotakura zvekunze giya 131.32.800
Mitsara mitatu yakatenderera yerudzi rwekucheka ine zvigaro zvitatu. Iwo ekumusoro uye ezasi emigwagwa uye eredhiyo nzira dzinopatsanurwa zvichiteerana, kuitira kuti mutoro wetsetse wega weti rollers ugone kutsanangurwa nemazvo. Inogona kutakura marudzi ese emitoro panguva imwe chete. Icho chimwe chezvinhu zvina zvigadzirwa zvine chikuru kutakura kugona. Iyo shaft uye radial zviyero zvakakura uye chimiro chakasimba. Inonyanya kukodzera michina inorema inoda yakakura dhayamita, yakadai sedhiraivhi remugomo, vhiri crane, gungwa crane, chiteshi chengarava, simbi yemvura yekufambisa turntable uye hombe tonnage rori crane.
Mitsara mitatu yakatenderera yakatenderera ine zvindori zvitatu, chepamusoro uye chepasi uye chakasarudzika nzira dzakaparadzaniswa zvichiteerana, kuitira kuti mutoro weteji yega yega yematairi ugone kunyatso tsanangurwa uye unogona kutakura akasiyana siyana panguva imwe chete. Icho chimwe chezvinhu zvina zvigadzirwa zvine chikuru kutakura kugona. Iyo axial uye radial zviyero zvakakura uye chimiro chakasimba. Inonyanya kukodzera michina inorema inoda yakakura dhayamita, yakadai seyakasiya bhagidhi vhiri uye vhiri mhando yekusimudza muchina Heavy michina, yegungwa crane, ladle slewing uye hombe tonnage rori crane uye mimwe michina.
Iyo imwechete mutsara muchinjikwa chinotenderera slewing inobereka yakafanana neayo mana poo yekubata idenderedzwa slewing kubereka, ine imwechete chete mutsara wezvinhu zvinoputika, zviri zvipfupi cylindrical rollers; demo rezvipenga rinotenderera rakarongedzwa muchinjikwa che90 °; kune mairi nzira mbiri mumaringi emukati neyekunze, uye iyo nzira yemigwagwa yakatwasuka. Hafu yematafura anotakura yakadzika axial simba uye hafu inotakura yakakwira axial simba.
Mutsara mumwechete mapoinzi mana ekubata bhora slewing akatakura ane mutsara wesimbi mabhora sechinhu chinotenderera, uye kune imwechete yekuzviparadzanisa block pakati pesimbi mabhora. Mhete dzemukati nekunze dzakabatana, uye mabhora esimbi anotakurwa kuburikidza nemakomba ekuzadza. Bhora iri kusangana nemapoinzi mana enzira uye inogona kutakura axial simba, radial simba uye kupidigura nguva panguva imwe chete.
Aya maviri marudzi emabhegi ekuuraya ane awo maitiro. Sezvo kuonana angled pakati chinotenderera uye chinotenderera pamusoro slewing kubereka iri rakakura kupfuura kuti bhora akatakura, kuonana angled pakati chinotenderera uye bhora akatakura achava makuru kupfuura kuti bhora akatakura. Naizvozvo, tichifunga kuti kudedera kweBoom kunofanirwa kunge kuri kudiki sezvinobvira, muchinjikwa wekutenderera slewing kubereka kunofanirwa kuve kunodiwa.
Three musara chinotenderera slewing inobereka chinhu chinokosha hutachiwana chinhu. Kuti uwane kutenderera kwakaringana, inoda kutakura simba rakawanda panguva yekushanda. Nekushandiswa kwese kwakawanda kweanogadzirwa michina, matatu mutsara roller roller slewing inobereka ndiyo inonyanya kukosha chikamu chemidziyo. Zvakakosha zvishongedzo zvinoshandiswa zvakanyanya mumakina akasiyana ekuvaka, michina yekurapa uye zvigadzirwa zvemumaindasitiri, uye zvakave zvichizivikanwa kwazvo. Yekunze giya yechiedza akateedzana slewing kubereka chinhu chakakosha chigadzirwa mumitsara mitatu chinotenderera slewing kubereka. Kana iyo midziyo ikapfekedzwa panguva yekushanda, inogona kuvezwa pakati pezvikamu zvakawanda kudzikisa kukakavara uye kubvaruka. Zvirinani kumisa michina uye kuitisa yakadzama kuongorora kusimudzira mashandiro eiyo ese michina michina. ukuwo
Kuti uwedzere hupenyu hwehupenyu hwevatatu mitsara roller slewing inobereka mumushini, zvinowanzo kuve zvakanaka kutarisisa kuora kwechigadzirwa kune chigadzirwa chinokanganisa uye kutora anti ngura matanho. Kazhinji, shambidza nzvimbo nguva dzose uye shandisa yekuchenesa mhedzisiro. Zvirinani kuchengetedza chigadzirwa chevhu chakaoma panguva imwe chete, teerera kushandiswa kwemafuta anodziya ngura, kana ukasangana nemamiriro akakosha, unogona kusarudza kushandisa antirust mafuta. Muchokwadi, matatu mitsara roller slewing bearing chinhu chakanaka kwazvo chigadzirwa. Zvirinani kusaibata nemaoko kana isiri kushandiswa, kuitira kuti usakanganisa bracket.
Sechikamu chakakosha chemaindasitiri zvikamu, matatu mutsara roller roller slewing kubereka ndiro dambudziko hombe rakatarisana neindasitiri. Pakanga pasina kuvandudzwa. Chete nekuenderera mberi kwekutsvaga uye kusimudzira, kugadzirisa chigadzirwa dhizaini uye chimiro, indasitiri inogona kuve nekuvandudza uye kusimuka. Semuenzaniso, mukugadzirwa kwezvikamu, iro dambudziko rekururama richiri rakafanira kutarisirwa. Parizvino, iko kurongeka kwezvikamu kuri pamusoro pekubvisa 0.5mm, asi isu tinofanirwa zvakare kuteedzera yakajeka uye yakajeka kunyatso, senge 0.2mm, chete chakaringana chinangwa. Ichi chigadzirwa chinogona kuwana mutsva kuvandudza.
Mumwe muenzaniso ndeyezvinhu zvakavakirwa pamutsara wechitatu wekusona mhete, iri dambudziko guru. Iyo alloy yakashandiswa anopfuura makore gumi apfuura haina kuvandudzwa, saka kutarisisa kunofanirawo kupihwa kwairi. Inofanirwa kuve yakagadzirirwa zvakafanira uye zvitsva zvinhu zviri nyore kushandisa zvinofanirwa kushandiswa. Chekupedzisira, zvikamu zvinoshandiswa muchimiro. Zvino, rutsigiro urwu runowanzo kuve nezvikamu zvina. Isu hatiratidzike senge tine hanya kuti rutsigiro runogona kukamurwa muzvikamu zvitatu kana kunyangwe zvikamu. Panyaya iyi, tinofanirwa kudyara vanhu zvakakwana uye zviwanikwa.
Pashure: kaviri mutsara akasiyana bhora saizi slewing inotakura isina giya 020.25.500
Zvadaro: Imwe-mutsara-muchinjikwa-chinotenderera slewing mhete ine yekunze giya 111 dzakateedzana